Yan Aung: ပို့စ်လေးတွေရှည်နေရင် ဒီလိုလေး ခေါက်ထားလိုက်ပါ...
ပို့စ်လေးတွေရှည်နေရင် ဒီလိုလေး ခေါက်ထားလိုက်ပါ...
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်လေးတွေကို မိတ်ဆက်လေးတင်ပြီးတော့ ကျန်တာတွေကို ဆက်ဖတ်နိုင်အောင် Read More… Collapse ဆိုတာလေး လုပ်ထားတာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်မှာပါ.
အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်လို Peek-A-Boo Post လေးတွေ လို့ခေါ်ပြီးတော့ မြန်မာမှုပြုရရင်တော့ `တူတူရေ၀ါးပို့စ်´ လေးတွေလို ပြန်ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ပုန်းနေရာက ၀ါးဆို ထွက်လာလို့လေ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
ခဏခဏလာမေးတဲ့ ဘော်ဘော်ဘလော့ဂါများလည်း ပြေလည်အောင်၊ နောက်နောင် မည်သူမဆို ကိုးကားနိုင်အောင်လို့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးသားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ…. Template ကို မွမ်းမံဖြည့်စွက်တာတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာမှမလုပ်ခင် အရင်ဆုံး Backup လုပ်တာဟာ အလေ့အထကောင်းလေး တစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် Template ကို Backup လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ စပါပြီ...
ဒီ script လေးကို ကူးပြီးတော့ </head>-tag မဆုံးခင်လေးမှာ ထည့်လိုက်ပါ။
Template ထဲမှာ includable id=’post’ ဆိုတာလေးကို ရှာပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Code လေးတွေကို အစအဆုံး အစားသွင်းလိုက်ပါ.
Template ကို Save လုပ်လိုက်ပါ။
Setting ထဲက Formatting Tab ကိုသွားပြီး Post-Template နေရာမှာ အောက်ပါစာသားလေးများကို ရိုက်ပါ။
ပို့စ်လေးတွေ တင်တဲ့အခါမှာ မိတ်ဆက်သဘောလောက် တင်ပြချင်တဲ့ စာပိုဒ်လေးတွေကို တစ်ပိုဒ်လောက် ဖော်ပြပေးပြီး ကျန်တာတွေကိုတော့ <span id="fullpost"> ရဲ့ နောက်မှာ ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ…
လွယ်ပါတယ်နော်…. Read More, Summary Only မထည့်ချင်ဘဲ မြန်မာလို `အကျယ်ဖတ်´၊ `အကျဉ်းဖတ်´ လို့ရေးရင်လည်း ရတာပါပဲ. စိတ်ချမ်းသာ သလိုသာ လုပ်ကြပါ ဘလော့ဂါမောင်နှမတို့ရေ... ကျွန်တော်ကတော့ Summary နေရာမှာ ကွန့်ပြီးတော့ Collapse လို့ လုပ်ထားတယ်ဗျ...
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ်လေးကို အဆင်ပြေအောင် ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ...
ဒီပို့စ်ခေါက်တာလေးကို ပြန်ပြီး update လုပ်ထားပါတယ်. သူ့ Original Coding ကို ကူးထည့်ရင် HTML Tag က မပိတ်ဘူးဆိုပြီး Error အမြဲပြနေတတ်ပါတယ်. အဲဒါကို နည်းနည်း ပြန်ပြင်ပြီး အရင် Coding တွေနေရာမှာ အစားပြန်သွင်းလိုက်ပါတယ်. ခုပြန်လုပ်လိုက်တဲ့ Coding တွေကို တိုက်ရိုက်ကူးထည့်နိုင်ပါတယ်. ဘာမှ ပြဿနာမရှိနိုင်တော့ပါဘူး. တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်.
အဆင့် (၂) အတွက် မိမိရဲ့ ဘလော့ဂ်ဟာ New Blogger Template ကို သုံးနေတာ ဖြစ်ရပါမယ်. Template Tab မှာ Expand Widgets ဆိုတဲ့ Box လေးကို Tick လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ. လိုချင်တဲ့ ကုဒ်လေးတွေကို အလွယ်တကူရှာတွေ့ချင်ရင်တော့ Template ကို ကော်ပီကူးယူပြီး Microsoft Word ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Notepad ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Paste ပြန်လုပ်ပါ. ပြီးရင် Ctrl+F ကိုနှိပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ စာလုံးလေးတွေကို လိုက်ရှာယူပါ.
ဒီပို့စ်ခေါက်တာကို လုပ်တာ ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုမကြာစေရပါဘူး ခင်ဗျာ. အောင်မြင်ကြပါစေ…
ကျေးဇူးကိုရန်၊ ကျောင်းစာတဖက်နဲ့ အချိန်ယူဘာသာပြန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်သူမရှိဘူးထင်နေတာ. တော်သေးတာပေါ့. မလေးဖတ်သွားသေးတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ.
ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပေါ့. ပန်းပင်တွေချည်း လှိမ့်စိုက်မနေနဲ့ဦး..
မဂျစ်ကြီးက ကြံရည်တိုက်မယ်တဲ့. သွားလိုက်ကြရအောင်လေ...
မောင်ရန်.. မင်းက ကြံရည်သောက်ဖို့ လူစုနေတာပေါ့လေး)
ကိုရန်အောင်... Step2လုပ်ပြီး Template ကို Save လုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
XML error message: Element type "script" must be followed by either attribute specifications, ">" or "/>".
ဆိုပြီး Error ပြတယ်... ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရလဲ... ကူညီပါအုံး...
MELODY MAUNG said...
Ko Yan yei,
Template ထဲမှာ includable id=’post’ ဆိုတာ
I cannot find it out as above you suggested. How comes?
အိုကေ သွားပြီဗျို့ မနည်း လုပ်ယူရတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
အကိုရေ...အဆင့် ၂ ကိုရှာမရဘူး...ဘယ်နားမှာ ရှိလဲမသိဘူး...:D
ကိုရန်ရေ...အဆင်တော့ပြေသွားပြီ...အရင် ပို့စ်တွေကိုကျ ဘယ်လို ပြန်ပြင်ရမလဲ မသိဘူး...
ကိုရန်ရေ၊ အဆင့် ၂ က ရှာတာ မူးနောက်နေလို. ဘယ်နားမှာများရှိလဲမသိဘူး။ find နဲ.ရှာတာလဲမတွေ.ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် ကူညီပေးပါဦးဗျာ။
ဒီပို့စ်ခေါက်တာလေးကို ပြန်ပြီး update လုပ်ထားပါတယ်. အားလုံးပိုအဆင်ပြေသွားအောင်ပါ...
ကျနော်လည်း အဆင့် ၂ မှာ ကိုရန်ပြောတဲ့ coding တွေ ရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်..
င်္Free Man said...
read more က အလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။
လုပ်ပါအုံးဗျ ကျွန်တော်က ခုမှ ဘလော့ကို စလုပ်ကြည့်နေတာဗျ။ ဘာမှကိုမသိဘူး
ရတွားဘီဂျ ၊တိုရန်အောင်ဂျီး ၊ ခုမှရတော့တယ် ၊လုပ်နေတာကြာပေါ့ ၊ နောက်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် ၊ စီပုံးမှာ နောက်ခံပုံတင်တာလေ ၊ ရတေး ဘူးဂျ လုပ်ဦး နော
Tag Game လေးကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဖတ်ကြရအောင်လား
ကျွန်တော့်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အမူအကျင့် (၁၀) မျိုး
Pet ချစ်တတ်သူများအတွက် ပုံတစ်ချို့
ManU Vs. Roma Soccer Match
ဘလော့ဂ်တွင် Snap Preview ထည့်ခြင်း
ဘလော့ဂ်တွင် Powerpoint Slide များထည့်သွင်းခြင်း
Easter Holiday နဲ့ ကျွန်တော်
Fund ကောက်ခံရေးနှင့် Statistics တစ်ချို့
Fund ကောက်ခံရာတွင် စဉ်းစားသင့်သော အချက်များ
Naming and Myanmarnization Committee
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အသေးစိတ် အကြံပြု ဆွေးနွေးချက...
ဘလော့ခ်ဂါတစ်ယောက်၏ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကြေငြာချက်…
အနှေးအမြန် ၀ိရောဓိ ပြဿနာ